Sander: Martin Vrijland
Lọ ọrụ ndị ntorobịa na-eme mkpọtụ banyere ime ihe ike n'ihi na 'nlekọta' bụ n'ezie mmetọ?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 November 2019	• 11 Comments
Minista Sander Dekker (ị maara ndị ikpe ndị ahụ, onye nwere ike ịhụ onye ọ bụla dịka ezigbo ọgọ nwa nwoke, ma ọ bụ ma eleghị anya, ọ bụ anụ ọhịa wolf na uwe atụrụ) na-ekwu na ọ wụrụ ya akpata n'ihi ike nke ihe ndị mere na ntorobịa. Dika Sander, ikekwe nka bu na George Orwell kowuputala ya n’akwụkwọ 1984 ihe akwukwo ozi bu. Na […]
Arịrịọ: Nyocha gbasara uche gbasara Mark Rutte na Sander Dekker na ikpe Anne Faber
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 3 April 2019	• 16 Comments
N'ihi na ọ dị ka ihe atụ Anne Faber bụ Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta, Okpukpe (ọrụ uche) nke aghaghị ịgba mbọ hụ na onye ọ bụla nwere ike nyochaa ahụike na-enweghị ikike ma mee ka ọ dị ala, anyị chọrọ ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-enwetakwa nchọpụta a. Gụọ dum faịlụ [...]
Nleta nile: 14.557.907